Ma u baahanahay VPS Hosting? | Laga soo bilaabo Linux
Ma u baahanahay VPS Hosting?
Sida dad badani horey u yaqaaneen FromLinux ilaa 2 bilood kahor on GnuTransfer.com server, gaar ahaan adeegyadeena waxaa loo qaybiyaa 2 VPS. Arrintu waxay tahay in dadka qaar ay isweydiin karaan waxa uu yahay VPS, ama ka fiican yahay, runti ma u baahanahay midkood? Taasi waa sababta aan kuugu keenayo maqaalkan uu qoray Marco Velazquez ee la xiriira VPS iyo wixii la mid ah:
Muddo dheer, xiisaha ku yeelashada joogitaanka internetka ayaa noqotay mowduuc aad u caan ah, ha ahaato shabakadaha bulshada ama haysashada degel internet kuu gaar ah. Maxaad u leedahay degel internet kuu gaar ah?
Sababtoo ah waxaad ku iibin kartaa alaabada internetka, waxaad ka shaqeyn kartaa guriga adigoo haysta dukaan dalwad ah, ama abuuri kara baloog kuu gaar ah oo aad kula wadaagi karto macluumaadka xiisaha leh dadka, casharrada, buugaagta ama aaladaha farsamada cusub; Waxaan ku leenahay tusaale cad halkan DesdeLinux, halkaas oo aan ka helno ilo macluumaad ah oo naga caawinaya inaan baranno oo aan wax badan ka barto Linux.
Marka qaadashada walaacan ee haysashada degel kuu gaar ah, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado nooca martigelin Waxay kugu habboon tahay, nooca bixiyaha iyo qorshaha ay ku siineyso, waxyaabaha ku jira softiweerka, qalabka iyo gaar ahaan nooca server ee aad ugu baahan tahay inaad ku martigeliso websaydhkaaga.
Qoraalkan waxaan uga hadli doonaa arrinta gaarka ah ee server-yada VPS.
Waa maxay adeegaha VPS?
VPS waa server dalwad ah, oo loo soo gaabiyay Ingiriis Virtual Private Server, in kasta oo ay tahay mid gaar loo leeyahay, waxay ku shaqeysaa server-ka muuqaalka ah kaas oo isna gurigiisa ku leh VPS kale, hase yeeshe, VPS kasta waa ka go'antahay kuwa kale.
Noocyada noocan ah ee server-yada ah ayaa kuu oggolaanaya inaad maamusho booska diskiga adag iyo sidoo kale maareynta xusuusta RAM, in kasta oo VPS-ka uu ku noqon karo mid aad u adag kuwa aan aqoonta farsamada kombiyuutarka ama nidaamka kombiyuutarka u lahayn.
VPS server wuxuu maareeyaa tallaabada dhexe ee udhaxeysa server-ka heeganka ah iyo server-ka guud, waxaa jira waxyaabo badan oo kaladuwan oo VPS ka badan kuwii hore.
Faa'iidooyinka adeegaha VPS
Faa'iidada ugu weyn ee aan ka arki karo server-kan ayaa ah inay yihiin 100% la cusbooneysiin karo, taasi waa in la yiraahdo maaddaama adeeguhu taageerayo waxaan kordhin karnaa xusuusta RAM, xawaaraha CPU, ama xawaaraha dekedda Ethernet.
Farqiga u dhexeeya martigelinta guud ee la wadaago ayaa ah inaadan ku tiirsaneyn isticmaalayaasha, adiguna waxaad mas'uul ka tahay waqtiga ugu dambeeya ee serverka, sidaan horay u soo sheegay ka hor intaanay ka go'nayn VPS-ka kale, taasi waa, haddii isticmaale kale uu qabsanayo 100% ee processor-ka tan ma ahan waxay ku dhacdaa VPS-kaaga.
Mid ka mid ah faa iidada badan ayaa ah kala duwanaanshaha xulashooyinka la helay markii la dooranayay nidaamka hawlgalka; waxaad dooran kartaa nooca Linux distro ama nooca Windows Server aad isticmaali doonto.
Marka xigta waxaan ku siin doonaa xoogaa tilmaamo macluumaad ah oo aad ku dooran karto VPS-gaaga:
Marka horeba, waxaa xusid mudan inaad ka heli karto 2 nooc oo ah server-yada VPS, "la maareyn karo oo aan la maareyn karin" ama "Maareyn iyo Maareyn", mid kasta oo ka mid ah wuxuu leeyahay faa'iidooyinkiisa iyo qasaarooyinkiisa go'aanka lagu dooranayo midka saxda ahna wuxuu ku xiran yahay adiga iyo aqoontaada Linux.
Uma baahnid inaad aqoon u leedahay Linux ama Windows server
Daqiiqado gudahood waxaad martigalinaysaa khadka tooska ah
Taageerada farsamada ayaa ka wanaagsan marka loo barbar dhigo kuwa aan la maamulin
Noocan ah server wuxuu kuxiran yahay softiweerka ay bixiyeyaashu rabaan inay ku rakibaan maaddaama ay ku siin doonaan taageero farsamo
Ma lihid 100% marin u helka adeegahaaga VPS
Qiimaha waa ka sareeyaa si ka duwan kan aan la maamulin
Halkan waxaad ka dooran kartaa barnaamijyada aad rakibayso iyo kuwa aan
Waxaad haysataa 100% adeegsigaaga VPS
Qiimuhu wuu ka hooseeyaa kan la maareeyay
Waxaad gabi ahaanba u baahan tahay inaad aqoon u leedahay Linux ama Windows Server.
Taageerada farsamada waa mid aad u yar.
Macluumaadkan waxaad ku bilaabi kartaa inaad go'aan ka gaarto nooca VPS ee adiga kugu habboon, qodobka muhiimka ah ayaa ah aqoonta aad u leedahay Linux.
Qodob kale oo muhiim ah ka hor intaadan dooran qorshaha VPS waa RAM.
Tan waxaa sidoo kale loo qaybin karaa laba qaybood: u heellan, oo ah nooc xusuus ah oo jir ahaan laga heli karo server-ka VPS, iyo Burstable, oo aan muuqaal ahaan la heli karin, laakiin loo isticmaalo keliya xaaladaha degdegga ah.
Tusaale si aad u heshid fikrad cad ayaa ah in haddii aad leedahay degel u dhexeeya booqashooyin u dhexeeya 3000 iyo 6000, 384 RAM VPS ah ay fiicnaan lahayd in lagu bilaabo.
Waxaan rajeynayaa in qodobkaan uu ahaa mid faa iidadaada ah wuxuuna kaa caawinayaa inaad go'aansato haddii server VPS uu yahay ikhtiyaarka kuugu fiican adiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Kuwa kale » Ma u baahanahay VPS Hosting?
Maqaal aad u wanaagsan. Intaa waxaa sii dheer, waxaan rajeynayaa inay waxtar leedahay in la keydiyo degel isku celcelis caan ah.
Wax aan waligey ii caddayn oo aan weligood la sheegin, waa isku-kalsoonaanta… Waxaan had iyo jeer ka hadleynaa booqashooyin gaar ah, laakiin weligood dad kuma wada hadalno khadka tooska ah.
Ma jiraan wax tirakoob ah oo ku saabsan Kheyraadka / Isticmaalayaasha khadka tooska ah?
Waqtigan xaadirka ah ee DesdeLinux (blog) waxaa jira in ka badan 50 qof oo isku mar ah khadka tooska ah, nambarku wuxuu ku kala duwan yahay 50 iyo 200 iyadoo kuxiran waqtiga maalinta.
Wanaagsan! Xusuusta xaaladahaasna weli kama badna 384MB?
Waa maxay adeegaha shabakadda ee aad ku shaqeyso? Baloogga waxaa lagu sameeyay PHP?
Waxaan isticmaalnaa NGinx iyo Blog waa WordPress, marka haa, waxaan isticmaalnaa PHP.
Waxay daabici karaan cashar nginx + wordpress ah, si fiican ayaan u maareeyay laakiin dhowr buug-gacmeedyo sifiican ugama shaqeyso aniga inaan dhaho
Runtii kuma talinayo inaad isticmaasho VPS, gaar ahaan haddii aad horeyba isugu dayday inaad ku martigeliso daruuraha (daruurta). Asal ahaan, farqiga ayaa ah in intaad kujirto VPS aad heysato adeege aad maamuli karto ku dhowaad sidaad doonto, adeegaha daruuriga waxaad leedahay hal ama labo kumbuyuutar halkaasoo macluumaadka lagu keydiyo (maxaa yeelay diskiyada ayaa jira) iyo qaar kale oo server ah macluumaadka waa la koobiyeeyay si loo qaybiyo. Farqiga xawaaraha waa mid cajiib ah.
kala duwanaanshaha qiimaha ayaa xitaa ka sii xiiso badan.
Waa in la caddeeyaa in haddii boggaaga uu yahay mid hay'adeed ama nooca blog ah, looma baahna VPS ama u heellan. Vps ayaa loo baahan yahay haddii aad dhab ahaantii isticmaali doonto qolofka, rakibi waxyaabo qaarkood oo aan ku imaanaynin sida caadiga ah (rubi, nginx, distro kale, iwm.), Nidaamyada xakamaynta iyo xusuusta, ku dheji dhowr degel websaydhkaaga, iwm.
Dhammaan martigelinta guud waxay leeyihiin php, FTP, SQL iyo maareeyaha boostada
Ku jawaab watasi
Maaha qasab. Kani waa baloog oo taraafikadiisu aad bay u badan yihiin, in Webhosting fudud uusan u adkeysan karin. Webhosting badanaa wuxuu bixiyaa kaliya Apache, waana halkaas meesha VPS ka yimaado, sababtoo ah waxaan ku rakibi karnaa wax kale, kiiskan NGinx.
Waxaan ku tijaabinayaa VPS Gnutransfer, runtu waxay tahay inay si fiican u socoto, in kasta oo aanan wali dhigin baraha internetka.
Waxaan sugayaa ololaha Gnupanel 2 inuu u soo baxo si uu u arko waxa dhacaya.
Oo aynu aragno haddii aan ku idhaahdo Ilaah Hostgatos ...
Hagaag waan hubaa inaad ku farxi doontid .. 😉
Waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee ah in la ogaado ayaa ah inay jiraan "noocyo" vps oo kaladuwan oo kuxiran nooca wacyigelinta, in kastoo aan u kala saari karno 2 kooxood oo waaweyn: openvz iyo kuwa la mid ah oo bixiya dabacsanaan yar xagga doorashada nidaamka / kernel laakiin waxay bixiyaan waxqabad wanaagsan, is-beddelid , cufnaanta, maareynta kheyraadka firfircoon, qarxida, iyo sahlanaanta maamulka ee noqoshada hufnaanta OS, iyaguna way ka jaban yihiin laakiin waxay u oggolaanayaan kormeerid; kooxda kale waxay noqon doontaa xen iyo wixii la mid ah, oo leh dabeecad la sii saadaalin karo, waxay ku siinaysaa wax badan oo ah waxa u heellan, qiimo jaban ku leh waxqabadka.
Gabi ahaanba waan ku raacsanahay qaybtaan
"Tusaale si aad u hesho fikrad cad ayaa ah in haddii aad leedahay degel ay ku taal inta u dhexeysa 3000 iyo 6000 booqasho, 384 RAM VPS ah ayaa fiicnaan lahayd in la bilaabo."
Hagaag, hadaadan aqoon sida loo wanaajiyo xusuustaada, howlaha dhow, ka tag Crons oo ku shaqeynaya srvr, iwm., Xaddiga xusuusta wananka runti kuma filna
Hambalyo, waa maqaal aad u faahfaahsan,
Waxa runti miisaamaya marka la iibsanaayo a server dalwaddii - vps waa tirada isku xirnaanta isku mar, tirada ka badan ee booqashooyinka isku mar dhaca, waxaa ka sii badan tirada Memory-da iyo Isticmaalka CPU, martigelin la wadaago ayaa kaa xadideysa macnahaas [waxay ku siinayaan 1 processor iyo 512MB ama 1GB RAM], taas oo aan taageeri doonin taas waxaad leedahay tiro wadaad ah [ku dhowaad 30 - 50 wada-hadallo], waa laga bilaabo xilligaas oo ay tahay inaad horeyba uga fikirto VPS, kaas oo aad adigu u-habeyn doonto [kordhin doona RAM ama CPU dheeraad ah] iyadoo loo eegayo koritaanka ama kordhinta booqdayaasha isku mar websaydhkaaga.
Runtii ma waxaan u baahanahay balaayiin isticmaaleyaal ah Linux? Tayada intaan la gaarin tirada!
Jumpsuit ee bilowga ah, Qaybta 1